Shirkadaha u weecanaya Shabakadaha Bulshada ee Gudaha | Martech Zone
Arbacada, Juun 18, 2008 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Waxaa jira tan macluumaad ah oo ku saabsan dhammaan shabakadaha bulshada ee ku jira shabakadda, laakiin dhaqdhaqaaq ayaa socday si loo keeno qaar ka mid ah faa'iidooyinka shabakadaha bulshada intranet sidoo kale. Waxaan baaritaan xoogaa ah ku sameeyay mowduuca muddo nus-maalin ah kulan bulsheed aan kula hadlay IABC shalay iyo natiijooyinka ka soo baxay waxay mudan yihiin in si qoto dheer loo eego. Waxay ahayd inaan si qoto dheer u qodo si aan u helo macluumaad iyo shaashadda shaashadda, laakiin waxaa jira qaar yar ilaha halkaas ka jira ee bartilmaameedsanaya Intranet.
Intranet runti wuu shiday oo wuxuu ku dhintay shirkadaha badankood kahor tiknoolajiyada Web 2.0. Waa wax laga xumaado, maxaa yeelay shirkado badan ayaa damaanad qaata fikrad aan waligood dib ugu laaban mar haddii ay guul darreysato. Intranets-ka asalka ahi wax kale ma ahayn ee waxay ahaayeen dhisayaal shabakad xeel dheer oo waax walba ay ahayd inay u adeegsato dhajinta wararka iyo macluumaadka, iyadoon lahayn ilo iyo otomaatig midna. Microsoft ayaa bilawday Sharepoint, laakiin dadaalka loo baahan yahay in otomaatiga lagu sameeyo oo la ilaaliyo waxa ku jira ayaa wali ka sareeyay heerka xirfada ee celceliska shaqaalaha.
Iyadoo ay soo ifbaxday Google Apps, Shabakadaha Bulshada, Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 iyo aalado kale oo iskaashi iyo xiriir, waxaa la joogaa waqtigii Intranet uu dib u soo laaban lahaa.
Xaaladaha Ganacsi ee Shabakadaha Bulshada ee Gudaha
Kormeer iyo Wadid Istaraatijiyadaha Shirkadeed - hubi shaqaalaha, kooxaha iyo mashaariicda inay la jaan qaadayaan aragtida shirkadaha.
Heerarka Shirkadda Flatten - Waxay bixisaa waddo toos ah laga bilaabo agaasimaha guud ee shaqaalaha ugu hooseeya iyo tan ka soo horjeedda. Tani waxay horseedaa isgaarsiinta oo hagaagtay, hufnaan, kalsooni iyo awoodsiinta ee shaqaalaha.
Kor u Xiriirka Gudaha - siinta shaqaalaha hab ay ku heli karaan shaqaale kale oo dano guud ka wada leh gudaha iyo xitaa banaanka shirkadda - isboortiga, Kaniisadaha, hiwaayadaha, iwm. Lahaanshaha shaqaale xoog leh oo isku xiran waxay keeneysaa kordhinta qanacsanaanta shaqaalaha iyo sii-haynta.
Ujeedada - Jiilka Fikirka - aaladaha lagu soo saaro fikradaha ayaa caan ku ah in yar oo ka mid ah gudaha shirkadda weyn. Qalabka Digg-u-eg ee loogu talagalay dhiirrigelinta fikradaha lacagta dhabta ah iyo abaalmarinno kale ayaa caan ah.
Wararka iyo Macluumaadka - la wadaag shirkadda iyo shaqaalaha iyo war-saxaafadeedyada.
Resources - waxay bixiyaan maktabado, casharro, waxyaabaha suuqgeynta, dukumiintiyada wax soo saarka, caawimaad, istiraatiijiyad, yoolalka, miisaaniyadda, iwm.
Wadaagista Aqoonta iyo Wadashaqeynta - Bixi wikis iyo barnaamijyo wadaag ah si loo kordhiyo xawaaraha shuruudaha mashruuca, dukumiintiyada, iwm.
Workforc oo ku saleysan mashruuce - U fidiso macnaheedu shaqaalaha inay abaabulaan wixii ka baxsan goobta jir ahaaneed, heerka xirfadeed, waax, iwm. Awoodda raadinta iyo helitaanka shaqaalaha muhiimka ah waxay ka saaraan silsiladda amarka geedi socodka, taasoo u oggolaanaysa kooxaha farsamada gacanta inay abaabulaan oo ay dhaqso u fuliyaan.
Markii dib loo eegay shabakada, waxaa jiray dhowr 'dhadhan' oo ku saabsan sida shirkaduhu u adeegsadaan shabakadaha shabakadooda - iyo astaamaha shirkadaha iyo qalabkooda. Fadlan ila qaawso aniga waxyaabihii aan ka helay halkan - maadaama aanan marin toos ah u helin Google, Microsoft, Yahoo iyo IBM, waxaan la shaqeynayaa maqaallo iyo shaashado laga yaabo inay toddobaadyo… ama sano jiraan!
Moma Google ma aha mashiin raadis fudud, Moma sidoo kale waxay u oggolaaneysaa ilaha aadanaha in la muujiyo oo la aqoonsado iyo sidoo kale hantida dijitaalka ah. Bogagga qaarkood ee aan akhriyay, Google waxay leedahay nidaam dib-u-eegis koodh ah oo ku saleysan websaydh isku mid ah oo la yaab leh, oo loo yaqaan Mondrian.
Yahoo! Barxadda hore ayaa umuuqata inay si muuqata u muujineyso bayaanka howlgalkooda iyo sidoo kale inay abaabusho waxyaabo taageeraya bayaankaas shaqaalahooda si ay u ogaadaan. Waxaan layaabay sida quruxda badan ee muuqaalkani u egyahay - iyo, anigoo xukumaya caqabadaha Yahoo ee haysashada istiraatiijiyad, ma hubo sida ugu wanaagsan ee habkani u bixinayo.
Urur weyn sida IBM, oo leh boqolaal kun oo shaqaale ah, waxay u badan tahay inay tahay fikrad aad u fiican in la dhigo goob ay dadweynuhu ka wada heli karaan! Beehive waxay u muuqataa inay tahay ilo aad u fiican shaqaalaha si loo ogaado oo loo helo shaqaalaha kale.
Bogga Microsoft runtii wuxuu umuuqdaa inuu diirada saarayo ilaha shaqaalahooda alaabtooda iyo adeegyadooda. Intii u dambeysay, in kastoo, Microsoft ay bilawday Townsquare - codsi bulsheed oo isku xirka iyo iskaashiga ah.
Uma baahnid inaad noqoto shirkad weyn si aad ugu darto qalabka iskaashiga howlahaaga. Shirkadayda, waxaan u guurnay gebi ahaanba Google Apps oo xataa ku dhex daray Salesforce.
Tags: email istiraatijiyad sanado cusublaura lippay
Video: Sliderocket Beta Goor dhow!
Hey Doug, boostada gacanta ku haysa - shirkaddayda waxaan u guurnay Google Apps sidoo kale. Way fiicantahay Marka ujeeddooyinka sheekaysiga gudaha iyo waxyaabaha la midka ah ee weyn. Calender-ka iyo dokumentiyada ayaa sidoo kale u fiican ujeeddooyin gudaha ah. Waxaan ogaaday cilad yar laakiin. Ahaanshaha shirkad warbaahineed, waxaan ka shaqeynaa mashaariic badan waxaanan ogaadey in aanan rabin qaar ka mid ah shaqaalahayga oo hela macluumaadka dhammaan mashaariicdeyda Waxaan u wareegnay Deskaway waxaanan arkaa in marwalba aan dareemo inaan ahay qof kantarool badan. Waxaa intaa sii dheer waxaa jira xarumo wadaag ah mashruuc kasta si aan ula wadaagi karo baloogyada iyo feylasha iwm - in waxyaabaha la isku daro laga dhigo mashruucyada dhexdooda - falanqeyntuna waa gunno dheeri ah. sheyga ka maqan barnaamijka waa wada sheekeysiga laakiin markaa Google Apps wax ka badan ayaa ka dhigaya taas. DA ma aha aaladda kaliya - theres Zoho iyo Wrike iyo Basecamp iwm - laakiin waxaan ogaaday in Deskaway ay macquul ahayd - $ 10 - $ 25 - waxay kuxirantahay baahiyaha ur sidoo kale waxay leedahay interface SUPER ah - miyaad isku dayday qalab kasta oo noocaas ah?
JACAYL XAQIIQADA AAD KUGU JIRTAHAY FILMO MUUQAAL AH 🙂
Mahadsanid Aditya, waxaan ahay taageere weyn oo Seesmic!
Sep 5, 2008 at 12: 32 PM
post fiican. Waxaad seegtay mid si dabiici ah u koray, oo ay dhisteen laba shaqaale oo adeegsanaya aalado furan iyo horumarin (drupal) waana tusaale weyn oo kahortagga hoos-u-dejinta. Blueshirtnation.com, Shabakadda bulshada ee ugu Fiican iibsiga. Gary Koelling iyo Steve Bendt waa abuurayaasha. Xiriirada qaar….
Maqaallada ku saabsan Blueshirtnation
Waxay sidoo kale ku xusan buugga Charlene Li, "Groundswell".
Mahadsanid! Waa wax aad u xiiso badan marka shaqaalaha dhabta ahi ay iyagu iska qaadaan inay bilaabaan shabakad bulsheed. Waan hubinayaa.